Avia ange ry sambo mpihaza trozona hankaty amin’ny ranon’i Timor atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2009 21:31 GMT
Sarin'i Fat Old Sod tao @ Xanana Republic Gazzete, nahazo alalana.
Notsongaina avy tamin'ny mpampiasa Twitter @BILL_ROMANOS tamin'ny 31 Desambra midera ny nahitan'ny mpikaroka Aostraliana sy Timor Tatsinanana ny lohateny, izany no vokatry ny fikarohana natao vao haingana momba ny fiainana any anaty rano any: Hita tany amin'ny 50 km (30 maily) miala avy amin'ny morontsiraky Timor atsinanana manko ny toerana ahitana trozona sy feso (dauphins), amin'ny karazana trozona maro, betsaka indrindra.
Namelona fanantenana ho an'ny sehatr'asam-pizahantany ho an’ i Timor atsinanana, izay firenena mbola tanora sy nanana ny tantarany nanjakan'ny korontana, noho izany io fahitana io. Ary dia mbola nanana ny lanjany lehibe indray ny helodrano stratejikan'i Wetar-Ombai. Na dia malaza ho lalana fandalovan'ny “Sambo mpisitrika nokleary Amerikana sy Aostraliana manavatsava ny nosy maron'i Indonesia“ aza izy, eto kosa dia izy no helodrano mampisaraka an'i Pasifika amin'ny soso-nofontany Eorazia fantatra amin'ny amin'ny maha- “lalana lehibe fifindra-monin'ny biby anaty ranomasina mivezivezy amin'ny oseana pasifika amin'ny oseana indiana“.
Cathal Foster (PT) no manoratra momba izany:
O LENTE ao amin'ny Timor Atsinanana sy ny karazam-piainana an-dranomasina ananany (PT)
Margarida A avy amin'ny Umalulik in Diam-pikarohana nahiana toeran'ny trozona sy ny feso eto amin'ny planeta , sy Toerana ankafizin'ny trozona sy ny feso hita tany Timor atsinanana (PT)
Wendy Heller ao amin'ny DivePhotoGuide.com in Timor atsinanana, Tranon'ny Trozona & Feso
@mostrador ao @ Twitter (ES)
Ary @greenoptions, @compost3r, @ecosfera, @celebritypaycut, @neandertal ni-tweets momba azy ity (PT, ES ary EN).
Ny hamaroan'ny karazam-biby, izay nifidy ny ranon'i Timor atsinanana ho “toerana ankafizina”, dia voalazan'ny mpamaham-bolongana tsindraindray eny ihany. Fat Old Sod, ohatra tamin'ny fanombohan'ny Novambra 2008, dia naka sary ny “Mega Fauna” izay nopihany avy eny ampisidinana ny ranon'i Timor avy any anaty voromby:
Sarin'i Fat Old Sod ao @ Xanana Republic Gazzete, nahazo alalana.
Nisy famoahan-kevitra nataon'olona tsy nitonona anarana iray tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Toerana ankafizin'ny Trozona sy Feso hita tany Timor atsinanana (PT):
Levi Novey, kosa na dia izany aza dia liana:
Heverina ho sarotra amin'ny fiarovana ny zavamihetsiketsika ny lalànan'ny fanjonoana, noho ny tsy fahafantaran'ny maro ny ankamaroan'izy ireny, ka manome vahana ny fanjonoana tsy ara-dalàna amin'niny fari-dranomasina iny. Nopihan'i Fat Old Sod an-tsary ireo mpanjono mena(n'ny ra) ny tanana :
Edy, Timorey, miresaka ny fahitana dia nametraka hevitra mahaliana amin'ny fepetran'ny fiainana anaty ranomasina:
Raha iverenana indray ny Whale Of A Time (Trozon'ny Fotoana iray) ,dia nambaran'i Fat Old Sod ny fahasambarany raha niangaviana hisidina tambonin'ny toerana izy, naka sary sady vavolombelon'ny zavatra manokana: